Dhacdo ugub ah oo ka dhacday garoonka Aadan Cadde | KEYDMEDIA ONLINE
Dhacdo ugub ah oo ka dhacday garoonka Aadan Cadde
Dowladda Soomaaliya, ayaa loo jeediyay dhaleeceyn xooggan, kadib markii ay dib u celisay dhakhaatiir ka soo socdaalay Hargeysa, kuna sii jeeday Nairobi.
MUQDISHO, Soomaaliya - Labo maalin ka hor, 14, July 2021, garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, ayaa markii ugu horreysay marti galiyay dhaacdo ugub ah oo nuuceda oo kale aysan hore uga dhicin, kadib markii muwaadiniin Soomaaliyeed oo transit ku ahaa lagu xiray, kadibna laga reebay duulimaadkii, laguna celshay magaaladii ay ka soo duuleen.
Sida lagu baahiyay baraha bulshada, laba dhakhtar oo ka howlgaleyay isbitaalka Dr. Adna Aadan ee ku yaalla magaalada Hargeysa, ayaa muddo saddex maalin ah ku xirnaa garoonka Aadan Cadde, kadib, markii laga reebay diyaarad ay la socdeen oo ku wajahneyd caasimadda dalka Kenya ee Nairobi.
Dhakhaatiirtaan ayaa sheegay in sababsadeen baasaboorka Somaliland oo ay ku safrayeen, waxayna xuseen in aqoonsigii ay wateen oo dhan looga jeex-jeexay garoonka Muqdisho, ka hor inta aan dibna loogu celin Hargeysa.
Adna Adan, oo ah marwadi Ra’iisul Wasaarihii ugu horreeyay ee Soomaaliya, kadib xornimada, Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, ayaa Dowladda ku eedeysay hab-dhaqanka cusub, waxayna sheegatay in dhakhaatiirtu ay nabad qabaan, lana siin doono baasabooradii laga jeex-jeexay, sida ugu dhaqsiyaha badan.
Dowladda Soomaaliya weli kama jawaabin eedda loo jeediyay, hayeeshee, saraakiil ka tirsan hay’ada Socdaalka, ayaa Keydmedia Online, u sheegay in Dowladda Fadaraalka ay u cuntami weysay in Kenya ay shaabadda dal ku galka saarto baasaboor Soomaaliland.
Mid ka mid ah saraakiisha, wuxuu KON, u sheegay in DF isku dayday in dhakhaatiirta loo sameeyo baasaboorka Soomaaliga, loona fududeeyo socdaalka, si ay u gaaraan Kenya, hayeeshee ay diidday Marwo Adna.